Gudoomiye Mursal Waxaa looga fadhiyaa in uu muujiyo ID-cardkiisa siyaasadeed • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Gudoomiye Mursal Waxaa looga fadhiyaa in uu muujiyo ID-cardkiisa siyaasadeed
Gudoomiye Mursal Waxaa looga fadhiyaa in uu muujiyo ID-cardkiisa siyaasadeed
December 2, 2018 - By: Abdirisak Faamoos
Waxaa weli taagan xiisad ka dhalatay kala diris uu gudoomiye ku xigeenka Koowaad ee golaha sharci dajinta Cabdweli Ibraahim ku sameeyay Gudigii Miisaaniyadda,Maaliyadda iyo qorsheynta golaha shacabka kala diristaasi waxa ay dhalisay khilaaf dhexda uu ka galay golaha shacabka.
Gudoomiyaha Golaha Sharci dajinta (Golaha Shacabka) Maxamed Mursal oo shalay dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ayaa haatan ah shakhsiga la doonayo in uu kala cadeeyo sharci ahaanshiyaha kala dirista gudiga Miisaaniyadda,Maaliyadda iyo qorsheynta golaha sharci dajinta waxaa uu qorsheynaya haatan in uu ku dhawaaqo go’aan ay sugayaan xildhibaano ka tirsan golaha shacabka kuwaas oo ku kala qeybsan kala dirista gudiga Maaliyadda lamana oga waxa uu noqon doono go’aankiisa.
Soo dhaweyntii shalay loogu sameeyay garoonka diyaaradaha Aaden Cadde waxa ay muujisay sida xildhibaanada golaha sharc idajinta ay ugu kala aragti duwan yihiin habkii loo maray in la kala diro gudiga Maaliyadda golaha waxaana dad badan oo si aad uga war haya khilaafka ka dhex aloosan golaha sharci dajinta ay soodhaweyntii shalay ee Gudoomiye Mursal ku micneeyeen soo dhaweyn siyaasadeed.
Gudoomiye Mursal waxaa xiligan ku furan mowjado siyaasadeed iyo labo daran mid dooro marka la eego kala qeybsanaanta xildhibaanada golaha shacabka ee la xiriirta kala dirista gudiga Maaliyadda.
Maanta Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxaa uu marayaa tijaabadii ugu adkeyd waxaa dheehana xildhibaano iyo siyaasiyiin tuhun siyaasadeed ka qabay dhamaantood waxa ay si weyn uga dhur-sugayaan go’aankiisa iyo mowqfikiisa sharci iyo sharci darro ee ku saabsan kala diridda gudiga Miisaaniyadda,Maaliyadda iyo qorsheynta golaha shacabka waxaase hubanti ah in go’aankiisa uu dhalin doono murano siyaasadeed.
Gudoomiye Maxamed Mursal waxa uu maanta muujin doonaa ID card-kiisa siyaasadeed ama waxa uu ciyaari doonaa shaxdii ay ciyaari jireen kaadiriinta looga dambeeyay siyaasadda.